Soo dejisan BBM 3.3.21.78 – Vessoft
Bogga rasmiga ah: BBM
BBM – software ah si ay ula xiriiraan saaxiibada isticmaala aaladaha ku salaysan, BlackBerry ee Android iyo macruufka ka hawlgala nidaamka. software The u saamaxaaya in ay ula xiriiraan saaxiibada in chat, dhaafsadaan fariimaha codka iyo soo diraan files of size kooban. BBM kuu ogolaanayaa inaad fariimo u diro badan isticmaala iyo ka qayb chat group la isticmaala badan. software waxa uu isticmaalaa hab amaan ah kala iibsiga fariin kaas oo bixiya sirta buuxa xogta shakhsiga. Sidoo kale BBM awood in la furo ama la xiro helaan in sawiro, files iyo content kale ee user.
Exchange farriimaha cod iyo sawiro
Waxay diraysaa fariin in badan isticmaala
Taageerada chat kooxda
Bandhigay xaaladda diray farriimo
Soo dejisan BBM
Faallo ku saabsan BBM
BBM Xirfadaha la xiriira